Marwa Elselehdar: haweenaydii lagu eedeeyay inay xayirtay kanaalka Suez | Berberanews.com
Home WARARKA Marwa Elselehdar: haweenaydii lagu eedeeyay inay xayirtay kanaalka Suez
Marwa Elselehdar: haweenaydii lagu eedeeyay inay xayirtay kanaalka Suez
Egypt-(Berberanews)-Bishii aynu soo dhafnay, Marwa Elselehdar ayaa waxay la kulantay arrin la yaab leh.
Waxaa soo ifbaxay wararka sheegaya in markab weyn oo xamuul qaaado laguna magacaabo Ever Given uu fadhiistay kanaalka Suez, arrintaas oo saameyn weyn ku yeelatay mid kamid marinka ugu muhimsan ee maraakiibta caalamka
“Aad ayaan ula yaabay,” ayay tidhi Marwa oo ah gabadhii ugu horeysay ee naaquuda markab ka noqoto dalka Masar.
Xilliga markabku fadhiisanayay kanaalka Suez, Ms Elselehdar ayaa maamulka u haysay markabka Aida IV, boqolaal mayl meel u jirta biyaha Alexandria.
Marwa Elselhedar waa 29 Jir waxayna BBC-da u shegetay inaanay ka warqabin cida faafisay wararka been abuurta iyo danta ka la haayeen.
“Waxaan u maleynayaa sababta la ii badhtilmaamedsaday in aan guul ka gaadhay. howshan anigoo ah haweeney Masaari ah,” ayay tidhi Marwa.
” Aragtida dadka ee warbixinta been abuurka ee baraha bulshada iga asoo dhigay aad ayay u qalafsanayeen waana kuwo niyad jab leh, balse sidoo kale waxaa jiray dad kale oo wanaag badan goobta ku qoray sida dadka aan isla shaqeyno oo garab i siiyay, sidaas darteed waxaan go’ansaday in aan diirada saaro wixii wanaagsan cadhadeydana waxaan ku baddelay jaceyl”.
“Waxaa xusid mudan in aan caan noqday weliba ka duwan sidi hore aan ahaa.” Waxaa sidaasi sheegtay Marwa.
Bisha soo socota Marwa Elselhedar ayaa uu fadhiisan doonta imtixankeeda kama dambeysta ah ee ay ku doonayso inay noqoto Captain-ka Markabka (naaqudaha guud) waxayna ku rajo weyntahay inay tusaale u noqon doonto dumarka.
“Farinta aan u dirayo dumarka doonayo inay ka shaqeeyan badda ayaa ah, waa in aad u dagaalanto waxaad jeceshahay hana ogolaan in wax yar oo nacayb ah ay ka hor istaagto hamigaaga.” Ayay ku dhiiragelisay Marwa Elselehdar.
haweenaydii lagu eedeeyay
Previous articleSaraakiil ka soo goostay Milateriga Somalia oo Hargeysa lagu soo dhaweyay
Next articleFannaanka Ismaaciil Aar oo lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho